Ciyaartoyda Man United oo si cad u muujiyay go’aankooda kaga aadan imaatinka Diego Simeone ee kooxda Red Devils – Gool FM
Ciyaartoyda Man United oo si cad u muujiyay go’aankooda kaga aadan imaatinka Diego Simeone ee kooxda Red Devils
Dajiye January 15, 2019
(Manchester) 15 Jan 2019. Warbaahinta England ayaa soo warisay go’aanka ciyaartooyda kooxda Manchester United ee kaga aadan imaatinka macalin cusub, hadii uu kooxda ka dhaqaaqo tababaha ku meel gaarka ah ee Red Devils Ole Gunnar Solskjær dhamaadka xili ciyaareedkan.
Kooxda Manchester United ayaa la shaqeynta tababare Ole Gunnar Solskjær waxay gaartay 6 guul xiriir ah, taasoo ka dhigtay in tababare Solskjær uu ku helo arintan amaan xoogan.
Hadaba wargeyska “Mirror” ee kasoo baxa gudaha dalka England ayaa wuxuu sheegay in ciyaartoyda kooxda Manchester United ay si xoogan u doonayaan in Ole Gunnar Solskjær uu noqdo macalinka joogtada ah ee kooxda, isla markaana uu sii joogo kooxda xili ciyaareedka soo aadan.
Wararka ayaa waxay intaas kusii darayaan in laacibkii horey ee kooxda Manchester United uu u qalmo arintan maadaama uu bixiyay sabab ku filan uu ku xaqiijin karo in sidaas ay dhacdo.
Inkastoo kulamadii ay dhowaanahan ciyaareen ay wada guuleysteen, hadana Manchester United ayaa waxay wali raadineysaa tababar kale, waxaana shaqsiyaadka ay maamulka Red Devils baadi goobka ugu jiraan ugu cad cad macalinka kooxda Atletico Madrid ee Diego Simeone.
Jordi Alba oo si jees jees ah kaga jawaab celiyay, kadib isbar-bardhig lagu sameeyy mid ka mid ah xidigaha Real Madrid iyo Messi
Mid ka mid ah halyeeyada kooxda Arsenal oo si kulul u weeraray Mesut Ozil